4. Anantara Paccayo | Dhamma Training Center
Jul 25 th, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၄-အနန္တရပစ္စယော Anantara Paccayo (Proximity condition) PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၄-အနန္တရပစ္စယော Anantara Paccayo (Proximity condition) ...
Mar 27 th, 2020
၄- အနန္တရပစ္စယော Anantara Paccayo (Proximity condition) PDF
၄- အနန္တရပစ္စယော Anantara Paccayo (Proximity condition) PDF ၄- အနန္တရပစ္စယော Anantara Paccayo (Proximity condition) PDF...
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၃။ အနန္တရပစ္စယော Anantarapaccayo (Proximity condition) 4. Anantarapaccayo Paccayaniddeso ...
၃။ အနန္တရပစ္စယော Anantarapaccayo (Proximity condition) (2 of 8)
Anantarapaccayo Pañhāvāro Kusalo dhammo kusalassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ anantara-paccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu...
၄-အနန္တရပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ ၄၁၇။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခန္ဓာ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနုလောမံ ဂေါတြဘုဿ။ အနုလောမံ ဝေါဒါနဿ။...
၃။ အနန္တရပစ္စယော Anantarapaccayo (Proximity condition) (4 of 8)
၄-အနန္တရပစ္စယော ပဥှာဝါရ ပါဠိနှင့် မြန်မာ zawgyi ၄၁၇။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခန္ဓာ...
၃။ အနန္တရပစ္စယော Anantarapaccayo (Proximity condition) (5 of 8)
၄။ အနန္တရပစ္စယော ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ အနန္တရ (န+အန္တရ) အန္တရ = အကြား၊ ကွက်လပ်။ န = မရှိ မည်သည့် စိတ်မှအကြား၌ မခြားသဖြင့် အခြားမရှိဟု ခေါ်သည်။ အကြားမရှိဘဲ ရှေ့စိတ် နောက်စိတ် နှစ်စိတ်...
အာရုံ၏ထင်ရှားမှု၊ မထင်ရှားမှုအလိုက် ၀ီထိအစဉ် အာရုံထင်ရှားမှု၊ မထင်ရှားမှုအလိုက် ၀ီထိဖြစ်စဉ်ကို အတိမဟန္တာရုံ၊ မဟန္တာရုံစသည်တို့ကိုလည်း သိထားရပါမည်။ ၁။ အတိမဟန္တာရုံ = ထင်ရှားအားကြီးသည့်အာရုံ ၅-ပါး ဥပါဒ်ပြီးနောက် စိတ္တခဏတစ်ချက် အလွန်တွင် ဒွါရ၌ ထင်လာ၏။ အလွန်များသော ၀ီထိ...
၃။ အနန္တရပစ္စယော Anantarapaccayo (Proximity condition) (7 of 8)
နိရောဓသမာပတ်နှင့် အနန္တရသတ္တိ zawgyi အနာဂါမ်နှင့် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် နိရောဓသမာပတ် ၀င်စားတော့မည်ဆိုပါက ရူပါဝစရပထမဈာန်မှ စကာဈာန်ကို အဆင့်ဆင့် ၀င်စားရပါသည်။ နောက်ဆုံး နေ၀သညာနာသညာယတနဈာန် စိတ်ဖြစ်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ထပ်မံ၍ မည်သည့်စိတ်မှ မဖြစ်တော့ပေ။ စိတ် စေတသိက် စိတ္တဇရုပ်များပါ ချုပ်ငြိမ်းသွားပါသည်။...
စိတ္တဟဋ္ဌမထေရ်ဝတ္ထု zawgyi သာဝတ္ထိမြို့နေ အမျိုးကောင်းသားတစ်ဦးသည် တောထဲနွားပျောက်ရှာရာ နေမွန်းတည့်လာသဖြင့် ထမင်းလည်းဆာ လူလည်း ပင်ပန်းလာပါသည်။ ထိုစဉ် ရဟန်းတော်များသီတင်းသုံးရာ ကျောင်းကိုမြင်သဖြင့် အစာတခုခု ရလိုရငြား ကျောင်းထဲဝင်သွားရာ ဆွမ်းကျန် စွန့်တော်မူသဖြင့် ဗိုက်ဝအောင် စားခွင့်ရလေသည်။ စားရသည့်ဆွမ်း အလွန်ကောင်း နေသဖြင့်...